Iinyani zooMbane abaMele ukuba bayazi - iBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW:
Iinyani zooMbane ekufanele ukuba uyazi
EyoKwindla 14, 2020 by UJoseph Webb, Iimbono zizonke:
Abasebenza ngombane ziingcali abajongana nokuphilisa iingcingo kunye nemitya yombane. Umntu osebenza ngombane kufuneka enze iminyaka ethile yoqeqesho kubandakanya ukufundisisa isifundo ukuze kufezekiswe izakhono zomsebenzi wombane.
Masijonge kwiiZakhono ezahlukileyo zaBakhweli boMbane: -
# 1. Oomatshini abaziingcali abaziingcali
Ngaphambi kokuba ubize umntu osebenza ngombane kunyanzelekile ukuba ufumanise ukuba luhlobo luni lomsebenzi ekufuneka lwenziwe ngaphakathi endlwini okanye eofisini. Ngalo naluphi na uhlobo lomsebenzi omkhulu wombane, kuya kufuneka ufowunele ingcali yombane.
Iingcali ngabagqatswa abafanelekileyo abagqibileyo izidanga zobunjineli zombane. Phambi kokugqitywa kwesifundo sabo sokufundela ekugqibeleni banelungelo lokufaka isicelo sephepha-mvume, ke ekugqibeleni ukubamba ilayisenisi kumenza ukuba asebenze zonke iintlobo zomsebenzi wombane, njengoko kuvunyelwe ziibhodi zombane zikarhulumente.
Ngexesha lokufunda, uya kuqeqeshwa malunga nemithetho kunye nemigaqo engasetyenziselwa ukuhambisa umbane ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo. Zimbini iintlobo zeelayisensi ezikhoyo zokugcina umbane njengelayisensi enkulu kunye nelayisensi yokuhamba. Kuya kufuneka ukhethe umntu onombane onelayisensi yokusebenzisa umbane.
# 2. Uyazi ukuba ngumbala mni othethayo
Ngoku xa sithetha ngombane usenokungabi ngumfundi ophumeleleyo kodwa onephepha lezifundo eliqinisekisiweyo. Ngaphandle kokuba iyayazi kwaye iyayiqonda intsingiselo yemibala, ayinakho ukwenza nawuphi na umsebenzi wombane kwindawo yakho. Kuya kufuneka ayazi ubumbano nombala weengcingo. Unokuzicombulula iingxaki ezinxulumene nentambo zefowuni ngokulula.
Kwangoko iingcingo zazingaphakathi kwamatyala awayexhonywa ezindongeni kwaye unokufumana lula imibala eyahlukeneyo yeeleyi. Wena njenge-layman awuzokwazi ukwenza umsebenzi, ngelixa umbane uza kufumanisa iingcingo ezingezizo, ezakhayo nezingathathi cala.
Nakuphi na ukudibana okungalunganga kuya kubangela isiphaluka esifutshane kwaye ungachukumisi iingcingo kwaye ubize ingcali onokujonga kuyo ugqibezele umsebenzi ngokulula.
Iindidi ezahlukeneyo zemisebenzi eyenziwa ngumbane oqinisekisiweyo:
Ukufakwa kombane: Ixhaphake kakhulu into yokuba iingcingo zombane zezakhiwo, imigca yokuhambisa, kunye noomatshini bokuhamba ziqhutywa ziingcali. Ufakelo lunokuba lolokulungisa okanye ulwakhiwo olutsha lweentambo zombane. Rhoqo unokufika ufakelo zombane xa ufakelo lombane luqhutywa.
Umlondolozi wombaneUmsebenzi ophambili wokulungiswa kombane ukwenza umsebenzi wokugcina icandelo lombane. Ziyadingeka kumzi mveliso, kwiindawo zokuhlala okanye kwizakhiwo ezintsonkothileyo, phantse zonke iindidi zifuna ukugcinwa komsebenzi wombane kwaye kuya kufuneka ufowunele umntu osebenza ngombane ngalo lonke ixesha ufumanisa ingxaki ilele kwiingcingo kunye nezixhobo zombane.
Isifakelo sombane sasekhaya: Yonke ufakelo lombane lwasekhaya lwendlu yombane kunye ne-wirings ziqhutywa ngogesi basekhaya. Bahlukile kolunye udidi njengoko umsebenzi wabo ulinganiselwe kusuka kwizorhwebo zombane okanye zombane. Aba basebenzi banombane banemvume yokusebenzela kwiindawo zasekhaya.
Isixhobo sombane: Licandelo elahlukileyo, kodwa lihlala libonakala ekuphatheni izixhobo kunye nezixhobo zombane. Eyona njongo iphambili yabasebenza ngombane kukuyila izixhobo ngokugcina kunye nokusetyenziswa koxinzelelo, ukuhamba kunye nobushushu.
Ngalo lonke ixesha le wotshi zizinto zombane kunye nezinto zombane ezifunekayo ukwenza zonke iintlobo zomsebenzi, nditsho ukukhwela ibhayisekile kufuna umbane ozenzekelayo kunye nokuqhuba iicomputer okanye oomatshini bafuna umbane. Ukuba kukho izithintelo okanye iingxaki kwimigca yombane, uya kufuna umbane. Unga Khangela abasebenza ngogesi kwi-intanethi kwaye ukhethe eyona ilungileyo emva kokujonga iilayisensi zabo, uphononongo lwabathengi kunye nenqanaba lamava.
UJoseph Webb Matshi 14, 2020
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Umbane oGqibeleleyo, I-Electrician, ikhontraktha yombane. Bookmark le Permalink.
Novemba 17, 2016 Uwufumana njani uMbane oMbane ngeNjongo yakho yokuhlala? Xa uthenga, uqesha okanye usakha indlu entsha, ugxile kwiskimu sombala, uhlobo lwamakhethini oluya kujongeka luhle, luhlobo luni lwezixhobo lubonakala lungcono .. intshukumo yakho elandelayo kukucwangcisa, ukulungisa, ukulungisa okanye ukulungisa lungisa ubume be-wiring. Kubalulekile ukucwangcisa ubume be-wiring yakho okanye uye wayilungisa okanye yalungiswa ngogesi ukuze kuthintelwe iingozi zemililo yembovane, ukungcangcazela, kamva, kunokuba yingozi kakhulu. I-wiring yombane kunye nokucwangciswa kwesicwangciso ngumsebenzi onzima, […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Septemba 9, 2019 Qasha umbane kuzo zonke izisombululo zeWiring eziShiyekileyo Xa kuziwa kwimijikelezo yombane kunye ne-wiring, izinto ziya zikhohlisa, xa kukho ukungasebenzi kakuhle. Izinto zixinene kakhulu ngezinto zombane kangangokuba kuba nzima ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni kumbono we-layman. Kulapho umbane angadlala khona. Iingcali zombane ziya kukwazi ukukhangela imiba kwaye ziqonde ukuba kukho into eyenzekileyo nangaliphi na icandelo kwinkqubo. Kuba kuba nzima kubanini bamakhaya ukuba babe seluxolweni xa kukho […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Februwari 12, 2020 Ungayifumana njani eyona nkonzo ilungileyo? Ukuba indlu yakho ifuna ukulungiswa kweentambo Ukucinga ukuba uza kuyifumana njani inkonzo ebalaseleyo kwiingcingo zombane? Ewe, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni ngaphambi kokuhlalisa ngombane. Ukuba awinalwazi malunga nenkqubo, emva koko eli nqaku likukhuphele ngeenkcukacha oya kuzifuna. Khumbula ukuba ukuqesha umbane ayisiyo msebenzi onzima kodwa ngumsebenzi onzima ukufumana kufanelekile. Ukuba awuchithi mali yakho kunye nexesha ke ukwenza uphando sisigqibo sobulumko ngaphambi kokuba uqeshe […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Novemba 2, 2018 Iinkonzo zoMbane- ukulungisa iingxaki kunye nokongeza ixabiso kwiKhaya lakho Oochwephesha kwezombane baqeqeshiwe kwaye baxhotyiswe ngeminyaka yamava okujongana neemfuno ezahlukeneyo zombane zokuhlala. Banokujongana neeprojekthi zombane zasekhaya ezahlukeneyo kwaye ziyafumaneka kwiinkonzo zonxunguphalo ngesithuba seeyure ezingama-24 ngoochwephesha abanokuthunyelwa kwindawo ohlala kuyo naphi na xa ufuna. Ukufakelwa izibane kunye nokukhanyisa ukuba ufuna ukufaka i-wiring entsha okanye uhlaziyo olwanele, i-wiring endala, umntu osebenza ngombane uza kuvavanya inkqubo yakho kwaye abonelele […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Julayi 25, 2018 Izizathu ezi-5 zokuZibhengeza kutheni kufanelekile ukuba uqeshe uMbane wochwephesha Njengoko indlu yakho iphinde yasebenza, qinisekisa ukuba unomntu ofanelekileyo okanye inkampani oyenzayo. Ukubanolwazi lokunyanga kodwa ungayichazanga kuya kuthetha ukuchitha ixesha kunye nezixhobo. Umatshini wombane olungileyo uya kuba nesakhiwo sakho sihamba ngendlela eyiyo ukuze siphephe nayiphi na ikamva. Kukho izinto kunye nezikhokelo onokuzisebenzisa njengoko ujonge umntu onombane olungileyo. Umntu wenza impazamo. Ingcali yakho inokwenza iimpazamo kodwa kufuneka zikhawuleze ukuzilungisa. Sukuchitha yonke iprojekthi yakho yezindlu kuba ukhethe ukuthatha […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Agasti 1, 2018 Zimbalwa izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha ikhontraktha ye-HVAC Inkqubo yakho ye-HVAC yenye yezona nkqubo zibaluleke kakhulu kodwa ezingakhathalelwanga ekhaya. Xa isebenza kakuhle, ikhaya likhululekile kwaye impilo ilungile. Nangona kunjalo, xa kusebenza kakubi, ubomi abunakho ukunyamezeleka kwaye kulapho ke uyakuqonda ukuba ingakanani le nto ubuyithatha kancinci. Ungaze uphulukane namanzi de kube liqula loma; Ngaba kuvakala oku kuqhelekileyo? Ewe, kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ukhethe ikhontraktha elungileyo ye-HVAC ukuqinisekisa ukuba inkqubo yakho ye-HVAC ihlala [ exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 2, 2018 Plumbers- Iintlobo ezintathu zeenkonzo abanikezelayo Ukuba ungumnini-khaya ngaxa lithile ngexesha elithile, kuyakufuneka uqeshe iplumber. Kodwa ukuqesha nje nayiphi na iplumber akuyi kulunga. Ukuba unamathandabuzo ngumahluko phakathi kweekontraki zokuphaka kunye neeplumbers, ke impendulo ilapha kuwe. Inkqubo yangaphambili ifuna imfundo eyongezelelekileyo yokusebenza ngemicimbi enzima ebandakanya ukubakho kwamanzi, inkqubo ye-septic, iiprojekthi ezintsha zokwakha, okanye ukulungisa imibhobho yasekhaya / ukulungisa ngokutsha. Okuokugqibela kunokukunceda rhoqo […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Ngamana 8, 2018 Iindidi ezahlukeneyo zemisebenzi ye-Welding: Kucacisiwe ukuba ngumchazi Kweli nqaku, sichaze iintlobo ezahlukeneyo zemisebenzi ye-welding kunye nokuba zingatshintsha njani ubomi bakho bonke. Abantu bahlala becinga ukuba kuphela ngabo banesidanga seminyaka emine ukusuka eyunivesithi (kunye nezinye izihloko zokuxhasa izifundo ezinjenge-MA okanye i-PhD) abanokufumana phambili ebomini. Ngelixa uthandabuzayo ukuba uninzi luphumelele, luxhobile idiploma efanelekileyo ukusuka kwisikolo esifanelekileyo kunye nobungcali, kwezinye iimeko oko kungenjalo. Ukukhetha iYunivesithi elungileyo kunye noqeqesho ayisi […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Novemba 30, 2017 Ukuphuculwa kwendlu oku-5 ukuthengisa indlu yakho Ndichithe ixesha elininzi kunye nemali ndisenza izindlu kwiminyaka edlulileyo. Yonke into ukusuka emsebenzini wangaphandle ukubuyisela iimpompo zethusi kwigumbi lokuhlambela. Umbuzo endiwufumanayo lonke ixesha kukuba "Ngaba kufuneka ndilungise indlu yam okanye kufuneka ndizame nje ukuyithengisa njengoko injalo?". Impendulo ayilula kangako, kuya kufuneka ujonge ukuba ungakanani na umsebenzi onokuthi uzenzele. Ngaba uyakufuna ukuqesha iikhontraktha, oombane, iiplombers, abaphathi ngesandla njlnjl. Ngaba ungawenza umsebenzi ngokwakho? Kagakanani […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya